Kuphi Thenga Kratom Legal in Tennessee & Nashville
Posted by Lyndon Reys	 6 Amazwana
Isimo yakamuva esingokomthetho kratom in Tennessee & Nashville kusho izindaba ezimbi amalungelo nangenye US. wombuso. Hot on the izithende of the anti-kratom isinqumo in Indiana, ezimbili nje uthi enyakatho e Tennessee, libukeka komthetho omusha uvinjelwe ukusetshenziswa kwalesi zokwelapha zemvelo herbal. Kratom fans in simo ngeke besakwazi ukuthenga ngokomthetho noma usebenzise remedy. Ingabe lokhu kuqale umkhuba kazwelonke omusha, noma nje ezatholakala amanga futhi nokwesaba? Nanka amaqiniso njengoba siwazi mayelana Tennessee.
Ingabe Kratom Legal in Tennesse?
Ngeshwa, ingqondo engazange elanqoba isimo Tennessee. On July 1st, 2013, umthetho eside namahemuhemu ebekwa zadlula okuyinto amaza uvimbela ukusetshenziswa kratom, futhi manje isimo esingokomthetho kratom in Tennessee & Nashville engasekho for mpikiswano. By Section 39-17-452(a)(2) of Bill HB 0012 / SB 004, Tennessee uvinjelwe ngqo amabili key izingxenye kratom sika alkaloid, mitragynine and hydroxymitragynine. Lezi plant compounds ngokwemvelo-sokwenzeka kukhona izinto eziphilayo esitholakala ngaphakathi namaqabunga omuthi Mitragyna speciosa, owaziwa ngokuthi kratom.
Akukacaci ngalesi sikhathi lokho izinhlawulo esiyimpahla noma ukusetshenziswa plant noma imikhiqizo yayo. Ngakho, ukuze uphephe, uma uhlala Tennessee, kufanele sokumisa kratom capsule noma powder ukusetshenziswa ngokushesha.
Kungani Kratom Banned?
Okuxakayo ngokwanele, lwamanje imithetho Kratom in Tennessee & Nashville awusekelwe iyiphi izifundo langempela kratom ngokwako. Ngeshwa, the okwelapha odumile esetshenziswa kabanzi iye iqoqwa kanye nezinye 'highs zomthetho "embalwa evame edayiswa ezitolo ekhanda. Lokhu kusabela ngqo usinga abezindaba ngenjini eziqubuke muva phezu ukusetshenziswa ezinobuthi obulalayo okugeza nosawoti. Kunjalo, kratom, isitshalo yasendulo ukuthi belilokhu landa e-mpumalanga Asia izinkulungwane zeminyaka, has lutho ukwenzani okugeza nosawoti.
Empeleni, kratom kusemthethweni emhlabeni wonke futhi ngokuyinhloko njengemojuli ibhekwa eziphephile futhi eziphumelelayo herbal. It iye yasetshenziswa njengendawo umuthi wendabuko eminyaka ezingenakubalwa njengoba i jikelele energy booster nokuvikeleka. In the eminyaka ambalwa adlule, it uye wanda elalisebenza ebanzi ngokusebenzisa umhlaba, nalokho okutholakale muva nsuku zonke njengoba singcono yayo, amandla ezuzisayo. Kratom esiye ukucindezeleka, kube isixazululo ukusebenzela izimpawu zokucindezeleka, nomfutho wegazi, ukuvikela amaseli ngokumelene khulula umonakalo olukhulu, ekudambiseni izinhlungu arthritis kanye ukugobeka komhlandla, futhi ukuxazulula eziningi esiswini iziyaluyalu. Naphezu kwala maqiniso, the Governor of Tennessee namanje waqhubeka wasayina bill emthethweni.
It is namahemuhemu ukuthi kungenzeka a ucwaningo kwecala esakhokhwa umenzi wemithi eyaziwa kahle Smith Kline ziye zathonya isinqumo. The imigomo umenzi awaziwa, Nokho kwakungeke kube engavamile for a wemithi corporation giant ukuzama nokuqeda ukusetshenziswa zokwelapha ngamakhambi ehlukile.
U.S. States Where Is Kratom Illegal
Kratom manje emthethweni kokubili Tennessee and Indiana. It namanje kwezomthetho ngokugcwele lonke iU.S., Nokho kukhona uthi eziningana ukuthi lapho isimo yomthetho in umbuzo futhi Bangaya. Labo uthi zihlanganisa Vermont, Hawaii, Colorado futhi Arizona. Kungani manje, ngemva kweminyaka ngisho eminyaka of kratom ukusetshenziswa ephephile emhlabeni wonke? Azikho izifo ezingathi sína, ukulimala, noma ukufa ezihambisana kratom - ngisho noyedwa! Thina washiya ukuphetha ngokuthi bannings okunjalo kuphela eyashukumisela kwezombusazwe.
Indlela Thenga Ngokomthetho Kratom In The U.S.
Ngaphandle 2 uthi kakade okukhulunywa, Awukaze ukuthenga kratom ngokomthetho futhi ngokuphepha iyiphi enye US., futhi lonke eziningi zomhlaba. Konke kufanele ukwenze ukuthola othengisa kuqinisile online. Ngenhlanhla, umphakathi kratom abathanda global benzé eziningi legwork ngawe kakade. Kuncike uhlala insimu lapho kratom ukusetshenziswa kusemthethweni (okuyinto nje yonke indawo), bamane uthintane kratom izinkundla umsebenzisi ukuze uthole izincomo umhlabeleli kuphi ukuthenga.
Usezingeni kakhulu ekukhetheni, Intengo, insizakalo yekhasimende, nesivinini wemikhumbi, Classic Ethengisa online Bouncing Bear Botanicals kuwukudla okuthandwayo zisetshenziswa nabasebenzisi. Njengoba Bouncing Bear has amahhovisi ilungelo enkabeni America, e Lawrence, Kansas, ungaqiniseka kunjalo phezu ngentuthuko yakamuva zomthetho for the US. Iphinde akusho ubuhlungu ukuvumela othile deal okunye kokuhlupheka kanye ukubambezeleka of amasiko omhlaba. Nabathengisi amawofisi the U.S. ngokuvamile kungaba ngomkhumbi out oda ngosuku olufanayo.
Nakuba kunzima ukuthenga Kratom bangakini e Tennessee & Nashville ongahambanga umusa kratom fans, iningi lethu usazokwazi oda futhi bajabulele kratom ngokuphepha futhi ngokomthetho kulo lonke US. kanye nezwe.
Engizama ukuthola “ephephile” umthengisi ukwenza ukuthenga yami. NgikuBaba CHA INDLELA abathintekayo exhunywe kwi njll. yiluphi uhlobo komthetho. Vele asifuni ukubeka umyalelo futhi uyenze ukuthi kunqatshelwe. Sicela usisize!
Ngokwemvelo, Ngihlala shithole TN ngakho ngicabanga ungaqhubeka ukusebenzisa imithi ezilimaza isibindi sami kunokuba ukufinyelela kratom.
(a) (1) Kuyicala ukuba ngamabomu ukukhiqiza, ekwakhekeni, ukusabalalisa, ukuthengisa, ukunikela ukudayiswa noma babe nanoma yini capsule, iphilisi, noma omunye umkhiqizo yakhiwe noma iqukethe noma nesamba semali kwakwakhe, ngaphandle bupropion, ukuthi ikhipha ethathwe 2-amino-1-phenyl-1-propanone ngu ukuguqulwa nganoma iyiphi yalezi zindlela ezilandelayo:
Khona-ke ubala ton of izindlela kukhishwe wathi alkaloid. Lo mthetho alibe Kratom nokushiwo kuphela ekukhipheni noma ukulungisa alkaloids. Kubonakala sengathi grey ngempela endaweni. Muva nje usanda kuqala usebenzisa kratom ngenxa yobuhlungu emuva ngoba engenzi ukusebenza kimi njengetende Vicodin i am ebekiwe. Akusho zithi lokhu akubandakanyi nanoma yini evunywe FDA. Ngingu 100% isiqiniseko sokuthi akukho Kratom test kit ukuthi amaphoyisa ukuthwala azungeze ezimotweni zabo. babe nesibopho sokuphatha nalo futhi ungeke ube lutho ukhathazeke. Uma ku yePharoli futhi unike iphoyisa nesikhathi esinzima ungase aboshwe ngoba. Okunye-ke ukuthi amaphilisi wami ibukeke organic kokubeletha amavithamini :) Super Gray ku mthetho kodwa awukhulumi Kratom esimeni sayo un-okushintshiwe nhlobo.
Ngingalutholaphi ukuthenga Kratom ngaphandle inthanethi. Ngihlala e Mississippi eduze endaweni Jackson okuyinto Capital yethu.
Ingabe ikhona ezitolo Jackson Mississippi lapho ngingakwazi ukuthenga Kratom. Noma amaphilisi nge Kratom kuwo. Uma kunjalo ngicela ungitshele ukuthi zikuphi. I am uyahoxa nezidakamizwa futhi kudingeka impumuzo ngokushesha. Sicela usisize. Siyabonga
Izinkampani izidakamizwa basesimweni zebhizinisi “ukuvuna” inzuzo kusukela isifo womuntu, hhayi nje nokusindisa ukuphila noma ekusizeni humanity.When abazali walalela okubeka izingane zabo yokugoma bese ngokuzumayo ingane iba autistic (emva imfiva post-umgomo nokuquleka, kunjalo), base “Vuka” futhi bona base waqamba amanga zonke kanye ngokuphepha wokugoma.
Ukuvikela Big Pharma namuhla ukuze avikele Cabal bezinkampani lobugebengu esebenzisekayo bayokwenza noma yini — ngokuphelele noma yini — ukugcina inzuzo yabo ekuzigingqeni. Kwenza mehluko ngubani banayo ukugwazela, lokho izifundo banayo bakwazi ukuguqula ngokwamanga, noma ubani okumele abe sengozini ekuthuleni. Bona uzoyeka lutho ukwandisa base yabo inzuzo, ngisho noma lokho kusho ulimaza (noma ukubulala) abangenacala ezingenakubalwa.
Kratom, ngokwesinye isandla, kuyinto ezuzisayo kakhulu, Nkulunkulu isitshalo unikezwa elisiza abantu futhi wenziwa anyundele visciously futhi ngokungenabulungisa lezi lamasela futhi politick yabo bulles.
Ukuqinisekisa Ikhodi * 2+5=?